ချစ်သူများနေ့| PoemsCorner
ရောမရဲ့ စစ်ပွဲက အဆက်ပြတ်တယ်လို့ မရှိခဲ့ဘူး။ ဘုရင်မင်းက ပြည်သူတွေကိုအထာမ သိမ်းသွင်းပြီး စစ်မြေပြင်ကို စေလွှတ်ခဲ့တယ်။ ယောက်ျားသားတွေကမိသားစုနဲ့ ချစ်သူတွေကို မခွဲချင်ကြဘူး။ Claudius ရဲ့ ရက်စက်ပုံက လူတွေကိုမင်္ဂလာ မဆောင်ရလို့ အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်။ စေ့စပ်ထားကြတဲ့ လူတွေကိုလဲ စေ့စပ်ကြောင်းလမ်း ဖျက်သိမ်းရမယ်လို့ အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်။ လူငယ်အများက ချစ်
ပဲရစ်မှာရှိတဲ့ ဘာသာစကားပေါင်း ၃၁၁ မျိုးနဲ့ ရေးထားတဲ့ “ချစ်တယ်”ဆိုတဲ့ နံရံမှာ ချစ်သူနှစ်ဦး ဓာတ်ပုံရိုက်နေတဲ့ ပုံပါ။
ဘုန်းတော်ကြီး Valentine ရဲ့ ပုံပါ
ဒီပွဲဟာ နတ်ဘုရား Faunus ကို ပူဇော်တဲ့ ပွဲလို့လဲ တချို့ကပြောကြတယ်။ အဲဒီနတ်ဘုရားဟာ လူတပိုင်း ဆိတ်တပိုင်း ဖြစ်ပြီး ခေါင်းမှာ Pan လို့ခေါ်တဲ့ဂျိုပေါက်နေတယ်။တိရိစ္ဆာန်နဲ့လူတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်တယ်။ဒီလို နတ်ဘုရားကို ပူဇော်ပသတဲ့ ဖြစ်စဉ်အစဟာ ရှေးကတည်းက ရှိခဲ့တဲ့အတွက် အေတီ၁ရာစုက ရှိခဲ့တဲ့ ပညာရှင်တွေတောင် တိတိကျကျ မသိခဲ့ကြဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုနေ့မြတ်ရဲ့ အရေးပါပုံကိုတော့ ယုံမှားသံသယ မရှိခဲ့ကြဘူး။ သမိုင်းမှတ်တမ်းအရ Mark Antony ဟာ အေတီ ၄၄ခုနှစ်ရဲ့ နတ်ဘုရား ပူဇော်ပွဲတခုမှာ သရဖူကို Jul ius Caesar လက်ထဲ အပ်နှင်းလိုက်တယ်လို့ သိရတယ်။
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းရဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ရက်နေ့မှာ ဘုန်းတော်ကြီးတွေဟာ ရောမမြို့မှာရှိတဲ့ Palantine တောင်ထိပ်ရဲ့ ဂူတဂူဘေးမှာ စုဝေးကြတယ်။ ဒီဂူမှာ ဟိုးယခင် နန်းတက်ခဲ့ဖူးတဲ့ Romilus and Remus ညီအစ်ကို နှစ်ဦးကို ၀ံပုလွေမတကောင်က ကျွေးမွေး စောင့်ရှောက်ပြီး ကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ နေရာဖြစ်တယ်။ အဲဒီပွဲမှာ နောက်တမျိုး ကျင်းပပုံက လူကုံထံများဟာ ဆိတ်သရေ ကြာပွတ်ကို ကိုင်
Lupercalia ပွဲကို Valentine ‘s Day လို့ပြောင်းပြီး ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၄ ရက်နေ့ကို ရွေ့ခဲ့ကြတယ်။ဘုန်းတော်ကြီး Valentineရဲ့ ရာဇ၀င်နဲ့ ရှေးယခင်က ရှိခဲ့တဲ့နတ်ဘုရားပူဇော်တဲ့ ပွဲနှစ်ခုကို ပေါင်းစပ်လိုက်ကြတယ်။
နှစ်၂၀၀ နောက်ပိုင်းရောက်မှ ပန်းတွေနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ စာတွေ၊ ပစ္စည်းတွေ ပေါ်ခဲ့တယ်။ ပြင်သစ်ဘုရင် Henry IV ရဲ့ သမီးတော်တဦးက Valentine’s Day မှာကြီးကျယ်တဲ့ ညစာစားပွဲတခု ပြုလုပ်ခဲ့တယ်။အရွေးခံရတဲ့ မိန်းကလေးက လာရွေးသူ ယောက်ျားလေးဆီက ပန်းတစည်းကို လက်ဆောင်ရကြတယ်။
ချစ်တယ်လို့ ပြောဖို့ မတွန့်တိုကြပါနဲ့
အခွင့်အရေးဟာ မျက်စိလည်ပြီး ၂ခါ ရောက်မလာနိုင်ဘူး။
နောက်ကျတယ်ဆိုတာ သေတာကလွဲလို့ ဘာမှ မကောင်းပါဘူး။
အဖြူရောင်နှလုံးသားပိုင်ရှင်မှ ကို သားသားးးးးးးးးး ရေးသားသော ဘလော့မှ Poemscorner သူငယ်ချင်းများ သိစေခြင်းငှာ ကူးယူတင်ပြလိုက်ပါသည်…။
In: Others,Others Posted By: zawthetoo Date: Feb 14, 2013
ချစ်သူ များနေ့ သို့
million thz for sharing knowledges
ဟုတ်ကဲ့ပါ အိလေးရေ..။ ခင်ဗျားက ကျွန်တော့်ထက် အသက်ကြီးသလား ငယ်သလားတော့ မသိဘူး…၊ အိလေးပဲ ခေါ်မယ်ဗျာ…..။
အိလေးက ကဗျာတွေကို စုံအောင်လိုက်ဖတ်ပေးတဲ့ Poemscorner ရဲ့ ဝါရင့် ပရိသတ် တစ်ဦး ဆိုရင်တော့မမှားဘူး မဟုတ်လား
most of my times are at poems corner.
By: tabound at Feb 14, 2013
ဗဟုသုတရစရာလေးပါ ဖတ်သွားပါကြောင်း ~~
အရမ်းကြိုက်လို့share သွားတယ်
share ခွင့်ပြုပါ bro !
By: loafer at Feb 15, 2013
By: သားသားးးးးးးးးးးးး at Feb 15, 2013
ကျေးဇူးဗျာ ကိုဇော်သက်ဦး …
By: 13th at Feb 15, 2013
By: ami at Apr 24, 2013